Soosaarayaasha Warshadaha Iot Dtu / rtu - Shiinaha Warshadaha Iot Dtu / rtu Shirkado & Warshad
Qalabka isku xirka warshadaha Warshadaha gudbinta wireless wireless DTU 4g module module
Xallinta 7-qaab jajab jajab ah ee warshadaha, taageerida softiweerka shaqeynaya iyo xirmada horumarinta labaad, adeegyada habeynta, bixinta adeegyo taageero farsamo.
7 qaab buuxa Netcom gudbinta xogta warshadaha otomaatig mashruuc balaaran oo 4G RTU ah
Naqshadeynta qaabdhismeedka isku xirnaanta Terminalka, oo aad ugu habboon codsiyada warshadaha, barnaamijyada taageerada qoraalka, sidoo kale waxay si otomaatig ah uga soo ururin kartaa xogta aaladda iyo gudbinta hufnaanta laba geesoodka ah.
MDR2284 gprs / 4g cabbirka fog iyo xakamaynta wireless-ka warshadaha RTU ee leh MQTT
Warshadaha 4G wireless RTU
GPRS / 4G cabbiraadda fog ee wireless iyo teknolojiyadda xakamaynta
Taageer Modbus sayidkiisa & addoonkiisa / Codbixinta / Kicinta garaaca wadnaha ee maxalliga ah / telemetryka fog
Waxaa lagu dhex dhisay moduleka isgaarsiinta ee heerka fasalka oo leh processor madaxbanaan
Taageer TCP / UDP / ModbusRTU / TCP / HTTP / MQTT
Taageer soo saarida garaaca wadnaha
Tareenka / naqshadeynta darbiga
Guudmarka Faahfaahinta Degdega ah Chipset: ZTE Nambarka Moodalka: MDD3421 Codsiga: gudbinta xogta warshadaha otomaatiga Magaca Magaca: MIND Goobta Asalka: Sichuan, Shiinaha Nooca: Shabakadda 4G ee Warshadaha Heerka Xawaaraha DTU: 1200-115200bps ...
8 kanaalka helitaanka calaamadaha analogga ah Qaabdhismeedka cabbirka garaafka 4G RTU
MDR2184 RTU_Soo koobay
MDR2184 waa cabir cabir wireless ah iyo terminal kontorool (RTU) oo adeegsada shabakada GPRS / 4G wireless iyadoo durba laga helayo analogga iyo calaamadda dhijitaalka iyo gudbinta xakamaynta.
MDR2184 waa xal-wax-ku-ool ah oo wax-ku-ool ah oo leh qaab-dhismeed heer-warshadeed ah oo loo yaqaan 'GPRS / 4G module' iyo processor gundhig leh, kaas oo ogaanaya helitaanka xogta berrinka / gudbinta xogta wireless / xakamaynta fogaanta.
RS232 / RS485 dekedda taxanaha ah ee loo gudbiyo LTE wireless wireless gudbinta hufan 4G DTU
Naqshadeynta qaabdhismeedka xarigga korantada ayaa ku habboon jawiga warshadaha, wuxuu taageeraa barnaamijyada qoraalka, wuxuu ogaadaa xog uruurinta firfircoon wuxuuna leeyahay laba-waddo oo isu-gudbinta hufan.
MDDR3411 waxay taageertaa shabakada qaran ee 2/3 / 4G, waxay siisaa hal RS232 / 485 si toos ah gudbinta hufan, gelinta 2 wax soo saarka, 2 soosaarida gudbinta, hal interface wax soo saar koronto 4V, qaab dhismeedka modbus RTU, wuxuu si buuxda u taageeraa codsiyada qaabeynta warshadaha, Taageerada TCP / UDP iyo borotokoollada isgaarsiinta kale ee shabakadda, sheygan waxaa si ballaaran loogu adeegsaday cabbiraadaha fog ee warshadaha iyo kontaroolada.
Xiriirinta xiriirka wireless-ka ah nb iot gudbinta xogta darajada warshadaha ee DTU
Taageerada Borotokoolka CoAP, Shiinaha Telecom Cloud, NB-IoT,
LPWAN, taageer bixinta batteriga dibedda
MDN311 NB-IoT DTU waa terminaal dibadeed oo ku saleysan NB-IoT gudbinta xogta bilaa-waayirka ah, mugga yar, taageerida is-dhexgalyo badan; taageer khadka tooska ah, IDLE, xaaladda PSM, hel isticmaalka awoodda sugitaanka hoose; Taageer borotokoolka shabakadda UDP / CoAP, oo siinaya habka gudbinta xogta buuxda ee hufan ee isticmaalayaasha; Taageer baakadda garaaca wadnaha ee habboon, baakadda diiwaangelinta, cinwaanka; Taageer iskeen-u-dhismo IoT Cloud iyada oo aan la dhisin server-yada isticmaalayaasha; Si buuxda u taageer SCADA wershadaha, adeegsadayaashu uma baahna daryeelida borotokoolka isku dhafan ee isku dhafan, kaliya adoo si buuxda u soo gudbinaya taxanaha hufnaanta waxaad ku guuleysan kartaa dirista iyo helitaanka xogta bilaa-waayirka ah, taas oo ka dhigaysa aaladdaada inay ku xirnaato internetka iyadoon xaddidnayn waqtiga iyo goobta.